संसद् त फर्कियो भने ओलीले गरेका संवैधानिक नियुक्ति रहलान् ? यसरी हुनसक्छ बदर (भिडियोसहित) - योहोखबर
संसद् त फर्कियो भने ओलीले गरेका संवैधानिक नियुक्ति रहलान् ? यसरी हुनसक्छ बदर (भिडियोसहित)
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटन पछि गरिएका सरकारका सबै निर्णयहरुजनाएको छ । त्यसोत सर्वाधिक चासोको रुपमा रहेको संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर हुने की सदर भन्ने तर्क उठ्न थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सरकार कामचलाउ हुने भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तीसम्मको काम गरे । जुन कानुनसम्मत् तरिकाले बाञ्छनीय नभएको संविधानका जानकारहरु बताउँदै आएका छन् । तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र त्यस अवधिमा भएका सबै निर्णय अमान्य घोषणा गरिदिएको छ ।
यो संगै प्रधानमन्त्रीले अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका ३८ पदाधिकारी नियुक्तिको विषय संवैधानिक संकटमा परेको हो । जसलाई कानुनका जानकारहरुले भने सके स्वतः खारेज हुने, नभए पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गत मंसिर ३० गते अध्यादेशमार्फत् विभिन्न ११ वटा आयोगमा ३८ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।राष्ट्रपतिले माघ २१ गते विभिन्न संवैधानकि पदमा नियुक्त गरेपछि सभामुख स्वयंले माघ २३ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन समेत दर्ता गरेका छन् ।
संवैधानिक प्रावधान मिचेर परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र परिषद्को सिफारिस कानुनसम्मत नभएकाले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहितको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेपनि सरकारका प्रतिनिधि भने पदाधिकारी नियुक्ति भएर कारकारबाही सुरु भइसकेकाले कुनै फेरबदल वा खारेजीकोसम्भावना नभएको बताउँछन् ।
संवैधानिक नियुक्तिलाई लिएर नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षसहित कतिपयले संसदीय सुनुवाई बिना भएका ती नियुक्ति स्वतः बदर हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । कतिपयले भने अब यसको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतको पोल्टामा पुगेकोले उसकै निर्णय अनुसार सदर वा बदरले अन्तिम रूप पाउने ठानेका छन् ।